रश्मीको ‘हट एण्ड सेक्सी’ जलपरी अवतार [फोटो फिचर] – Taja Khawar
आज छुट्ने भनिएका पल शाहको मुद्दाको सुनुवाइ एक्कासी किन रोकियो ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो
बधाई छ: सगरमाथा आरोहण गरेर काठमाडौं फर्किए गायक राजु लामा (भिडियो सहित)
धरानमा अग्रता लिएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्धवार साम्पाङले गरे यस्तो अपील हेर्नुहोस…
रश्मीको ‘हट एण्ड सेक्सी’ जलपरी अवतार [फोटो फिचर]
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: ११:५८:३३
मनोरञ्जनNo Commenton रश्मीको ‘हट एण्ड सेक्सी’ जलपरी अवतार [फोटो फिचर]
अभिनेत्री रश्मी देसाइ सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय रहिन्छन् । उनले कैयौं टक शो पनि होस्ट गरेकी छिन् । उनको सुन्दरताको निकै चर्चा हुने गर्छ ।केही तस्वीर उनले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् । तस्वीरमा उनी जलपरी अवतारमा त्यस्तै पछिल्लो समय रश्मीका केही तस्वीरहरु चर्चाको विषय बनेका छन् ।
उनले नयाँ फोटोशुट गराएकी छिन् । उक्त फोटोशुटका केही तस्वीर उनले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् । तस्वीरमा उनी जलपरी अवतारमा देखिएकी छन् ।अभिनयको राम्रो तारिफ गरिएको थियो । उनले अघिल्लो वर्ष बिग बोसमा पनि फाइनलसम्मको यात्रा उनी गुलाबी बि-किनीमा फोटोशुट गराएकी छिन् । उनको यो बोल्ड अवतारलाई सामाजिक संजालमा निकै रुचाइएको छ ।
जहाँ उनको सुन्दरताको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।रश्मी पछिल्लो पटक नागिन ४ मा देखिएकी थिइन् । शोमा उनको भूमिका निकै कम समयको लागि देखिएको थियो । तर, उनको अभिनयको राम्रो तारिफ गरिएको थियो । उनले अघिल्लो वर्ष बिग बोसमा पनि फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेर चर्चमा रहेकी थिइन् ।
Last Updated on: July 12th, 2021 at 11:58 am
९९४ पटक हेरिएको
कुटाइ खाएर अस्पताल*मा र कुटेको आरोपमा हिरासत*मा रहेका उम्मेदवारको मत बराबर.,गोलाप्रथा*बाट कुटाइ खानेले जिते
बालेनले छोरी पाएको समाचार भाइरल बनेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिइन् श्रीमती सविनाले हेर्नुहोस…
यी स्वतन्त्र उमेद्वार जसले अरुको १ मत पनि पाएनन्.., आफ्नो भोट पनि हरायो !
हारेपछि भोट किनेको पैसा फिर्ता माग्दै माओवादी उम्मेदवार- यी व्यक्ति यस्तो (भिडियो सहित)
जित्ने आशा अझै छ, हामीले वडामा गुड फाइट गरिरहेका छौं : सिर्जना सिंह
उपमेयर जितेलगत्तै सुनिता डंगोल विवाह गर्दै ! कोसँग बिहे गर्दै छिन् ?
सामाजिक संजालमा माल्भिका सुब्बाको विरोध, चल्यो अनफलो अभियान